Qarax lala eegtay mas'uul ka tirsan degmada Dayniile | KEYDMEDIA ONLINE
Qarax lala eegtay mas’uul ka tirsan degmada Dayniile
Qarax xooggan ayaa daqiiqado kahor ka dhacay meel udhaw xarunta degmada Dayniile halkaasoo mas'uul ka tirsan maamulka degmada Dayniile gaarigiisa lagu qarxiyay!
MUQDISHO, Soomaaliya - Qarax noociisu yahay miino dhulka la geliyay ayaa waxaa lala eegtay gaari uu la socday Xoghayaha maamulka degmada Dayniile ee Gobolka Banaadir, waxaana gaariga uu qaraxa ku qabsaday xili uu marayay agagaarka Xarunta degmada Dayniile.
Qasaaro kala duwan ayaa lasoo sheegayaa oo qaraxaasi uu geystay, waxaana ku geeriyooday laba ruux oo kamida dad shacaba oo gaabta ka ag dhawaa iyo sidoo kale hal ruux oo isna ku dhaawacmay qaraxa, si rasmi ah weli ugama aysan hadlin maamulka degmada iyo kan gobolka.
Weerarada nuucan oo kale ah waxaa inta badan geysta kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda federaalka, mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda ee heer wasiir ilaa heer degmo ayaa sidan oo kale loo bartilmaameedsadaa mar waliba. Xoghayaha maamulka degmada Dayniile ee qaraxa ka badbaaday weli lama uusan hadlin warbaahinta, sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in uu bad-qabo.